Waa maxay sababta Maareynta Hantida Dijital ahi ay tahay Qeyb Halis ah oo ku jirta Nidaamka Teknolojiyadda Suuqgeynta | Martech Zone
Waa maxay sababta Maareynta Hantida Dijital ahi ay tahay Qeyb Halis ah oo ku jirta Nidaamka Teknolojiyadda Suuqgeynta
Arbacada, Agoosto 27, 2014 Arbacada, Oktoobar 28, 2020 Jenn Lisak Golding
Ka ganacsade ahaan, waxaan la macaamilnaa qalab kala duwan iyo codsiyo maalinle ah. Laga soo bilaabo otomaatiga suuq geynta ilaa raad raaca iibka ilaa emaylka suuq geynta, waxaan u baahanahay qalabkan si aan shaqadeena ugu qabsano si hufan una maamulno / ula socono dhamaan ololeyaasha kala duwan ee aan geynay.
Si kastaba ha noqotee, hal qayb oo ka mid ah nidaamka teknolojiyadda suuqgeynta ee mararka qaarkood la iska indhatiro waa habka aan u maareyno faylalkayaga, oo ay ku jiraan warbaahinta, sawirrada, qoraalka, fiidiyaha iyo waxyaabo kale oo badan. Aynu wajahno; Kaliya kumaheysan kartid galka kombiyuutarkaaga si aad u maamusho mashaariicda mar dambe. Waxaad u baahan tahay bakhaar dhexe oo kooxdaada ah si ay u helaan una wadaagaan faylasha lagama maarmaanka ah adoo waliba u habeeya abaabulkiisa. Taasi waa sababta maaraynta hantida dijitaalka ah (DAM) hadda waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka farsamada suuq geynta nidaamka deegaanka.
Widen, oo ah bixiye DAM oo leh iskudhaf ballaaran, wuxuu abuuray macluumaadkan ku saabsan sababta ay DAM u tahay cunsur lagama maarmaan u ah nidaamka teknolojiyada suuq geynta, iyadoo tusineysa siyaabaha kala duwan ee ay u fududeyso shaqooyinkeena sidii suuqleyda maalin kasta. Qaar ka mid ah natiijooyinka xiisaha leh ee ka soo baxa macluumaadka waxaa ka mid ah:
Suuqyadu waxay qorsheynayaan Kordhi kharashka dhijitaalka ah ee maareynta maaddooyinka 57% in 2014.
75% shirkadaha la daraaseeyay xoojinta istiraatiijiyadaha waxyaabaha suuqgeynta dijitaalka ah sida ugu sareysa mudnaanta suuq geynta dijitaalka.
71% suuqleyda ayaa ah hadda isticmaalaya Maareynta Hantida Dijital ah, iyo 19% ayaa qorsheynaya inay isticmaalaan DAM sanadkan.
Fiiri boggooda macluumaadka oo waxbadan ka baro sida aad ugu adeegsan karto DAM meheraddaada.
Wax Ka Baro Widen
Bixinta: Widen wuxuu macmiil u ahaa hay'addayda.
Tags: Maareynta Maareyntamuhiim ahxidheenkamaaraynta hantida dijitaalka ahmaareynta faylka martigelisayinfographicbiyo xireenkatikniyoolajiyadda suuqgeyntafidin